Horumar - Wikipedia
Waa is bedel ku yimaada nolasha bini aadamka kaasi oo mara heerar kala duwan oo ka biloowda halka ugu hoosaysa ay bulshadaasi joogtaa ilaa ay ka gaaran meesha ugu saraysa ay hiigsanynayaan.
"Horumarku wuxu noqon karaa dadaal looga gonleeyahay hagaajinta tayada nolosha (quality of life) ee muwaadiniinta dal gaar ah iyo kor u qaadidda beegaalka nolosha (Standard of living) ee dadkaas”.
Si kale u dhig,
''Horumarku waa dedejinta koboca dhaqaale ee dalka, tirtiridda saboolnimada iyo yaraynta farqiga dakhli ee dadka u dhexeeya”.
Mar kalena horumarka waxa lagu qeexi karaa "Isbeddel balaadhan oo lagu sameeyo xaaladda dhaqaale, bulsho, siyaasadeed iyo deegaan ee waddan waddamada kamid ah”.
Waa is bedel ku yimaada nolasha bini aadamka kaasi oo mara heerar kala duwan oo ka biloowda halka ugu hoosaysa ay bulshadaasi joogtaa ilaa ay ka gaaran meesha ugu saraysa ay hiigsanynayaan si ay u tiigalaan nolol heer sare ahna u gaadhan.
Horumarku waxa u noqon karaa mid uu qof amaba shakhsi gaadhey ama mid uu dal ama shirkad gaadhay farqi wayna waa u dhaxeeya oo isku mid maaha horumarka shakhsiga ah iyo kan dal gaadho waxay yidhaahdan culumadu horumarku in u qof horumar gaadho iyo in u dal horumar gaadho waxaa fudud dhinac marka laga eego in u dal horumar gaadho iyago u cuskanaya shaqda kalinimada ah e qof halgamaya maraayo iyo isabdalka adag e kalinimada ah e u maraayo SHakhsigaas is xilqaamay.
Marka aynu eegno dalkeena ilaahay mahadii gabi ahaanba way taaganyihin o way seesanyihiin dhaman kabayaasha nolosha sida caafimaadka, waxbarashada, deegan wanaagsan oo nadiif ah,dawlad dhisan iyo waliba dad dhisan sharci iyo kala danbayn wanaagsan nabad jirta oo hirgashay koboc dhaqaqaale o la sameyey maamul wanaagsan oo jira hadaba waxa inaga dhiman waa in aynu gaadhsino heer sare oo horumar baaxad wayn sameeno isla markaana guriga kicino shacab iyo dawladba.
Ugu danbayn shacab iyo dawladba waa in aynu dadajinaa nidaamkaas horumarka oo wada shaqayn toos ah wa in ay ka dhaxaysaa dawlada iyo shacabka sabab to ah dawladu kalikeed waxba dhesi kari mayso hadii anay helin taagerida shacabkeeda iyo hiilka tooska ah e ay ka halayso shacabkeeda walalyaal madax iyo mijaba waa wakhitigii Horumarka ee aynu dhaafi lahayn dalalka manta horumarka ku faana.
Tiirarka horumarka maxa ka mid ah?
Waxaa laga keenay "https://so.wikipedia.org/w/index.php?title=Horumar&oldid=202444"
Last edited on 19 Juun 2020, at 12:34